Talaabooyinka Lagu Kordhiyo My Followers on Instagram ▷ ➡️ Kuwa Raaca ▷ ➡️
Tallaabooyinka lagu kordhinayo kuwa raacsan barta Instagram
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 341
Instagram waa mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu caansan adduunka, Marka la gaaro 2019 waxay laheyd in kabadan hal bilyan oo isticmaale adduunka ah, tani waxay ka mid tahay shanta ugu caansan waana in faa'iidooyinka ay siiso adeegsadayaasheeda ay kordhaan maalin kasta, marka lagu daro adeegsigeeda saaxiibtinimo iyo istcimaal saaxiibtinimo ayaa ka dhigaya mid soo jiidasho leh dad badan.
Hadda, maahan oo keliya heerka xisaabaadka shaqsiyadeed ee waa faa'iido weyn, koontooyinka ganacsiga sidoo kale waa kuwo caan ah, waxaa jira in kabadan 25 milyan oo xisaab ganacsi halkaas oo maalinba maalinta ka dambaysa alaabooyinka iyo adeegyada nooc kasta leh loo suuq geeyo, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah meheradaha leh akoonnada ugu ganacsiga badan ee shabakadaha bulshada, laakiin sida dhammaan ganacsiyada oo kale marwalba waa lagama maarmaan in la istaago.
Sidaan horeyba u sheegnay, waxaa jira in kabadan 25 milyan oo xisaab ganacsi oo adduunka oo dhan ah oo nolosha ka dhigaya codsigan, waa macquul in laga fikiro inay jiraan dad badan oo bixiyaan alaab iyo adeeg isku mid ah taas oo ka dhigaysa tartanka ganacsi ee ka dhex socda barnaamijka mid aan kala joogsi lahayn oo aan had iyo jeer daacad ahayn.
Iyada oo kororka maalinlaha ah ee adeegsadayaasha, Instagram-ka ayaa bedeshay dalabka, illaa xad waxay u xuubsiibatay inuu noqdo mid shaqsiyeed oo ay ku jiraan dhinacyo badan oo badan aadanaha aad interface, taas oo aan faa'iido u ahayn dhammaan dadka isticmaala ganacsiga.
Kordhi Kuwa Raaca:
Haddii aad ka mid tahay xisaabaadka ganacsiga ee ay saameeyeen beddel algorithms-ka barnaamijka barxadda oo aad u baahan tahay inaad kordhiso kuwa raacsan, waxaan kugula talineynaa:
Waxaad u abuureysaa waxyaabo soo jiidasho leh macaamiisha mustaqbalka ee meheraddaada, xusuusnow in ganacsiyada oo dhan aan lagu jiheynin bartilmaameedyo isku mid ah, taas oo nagu hoggaaminaysa waxyaabaha soo socda, Miyaad abuureysaa waxyaabo ujeeddadiisu tahay inaad ku soo jiidato macaamiisha mustaqbalka ee qaybta aad xiiseyneyso? Markaad ka jawaabto su'aashan, waxaad ogaan doontaa inaad ku socoto wadada saxda ah iyo inkale.
Isticmaalka #, astaantani waa caawinaad weyn marka aad suuqgeyneyso, haddii aad taqaanid sida loo isticmaalo, waxay ku abuuri doonaan isbeddel gudaha shabakadda bulshada, waxay tilmaamayaan waxa mowduuca uu yahay ee sawirada iyo fiidiyowyadaWaxay sidoo kale u tilmaami doonaan macaamiisha iman kara "cinwaanada" daabacaadaha kale ee iyaga daneynaya. Waxaan kugula talineynaa inaad aad uga taxaddarto sida aad u isticmaasho qalabkan.
Sheekooyinka, kuwani hadda waa mid ka mid ah dariiqooyinka ugu xiisaha badan ee lagu gaadho dadweynaha, sheekooyinku waxay ku saabsan yihiin dhammaan daabacaadda, taas oo macnaheedu yahay inay yihiin hab istaag oo markasta ogeysii macaamiishaada iyo macaamiisha mustaqbalka wararka badeecadaada ama adeegyadaada.
Dadka qaarkiis waxay arkaan sheekooyinka oo keliya, maadaama ay aad ugu habboon tahay in laga ogaado wararka iyaga dhex mara, qofkii arka sheekadaadana wuxuu fursad u helayaa inuu si toos ah u booqdo astaantaada. Sidaa darteed waxaan ku talinaynaa waxaad iyaga ka dhigtaa kuwa ugu soo jiidashada badan iyo xog-warran sida ugu macquulsan.
2 Kordhi Kuwa Raaca:
Sidee loogala soo bixi karaa muusikada YouTube-ka barnaamij la'aan?
Sidee loo soo degsadaa fiidiyowyada YouTube barnaamijyo la'aan?